Birao manelanelana ny banky sy ny mpindram-bola Hiasa eto Madagasikara mandritra ny herintaona
Tontolo iainana Manohana an’i Madagasikara i Sina
Mitentina 50 tapitrisa ariary ireo fitaovana nomen’ny governemanta sinoa entina hanohanana ny governemanta Malagasy ny amin’ny
Kolikoly eto Afrika Mahatratra 150 miliara dolara ny fatiantoka
Mbola ambony hatrany ny tahan’ny kolikoly eto Madagasikara. Misy ny ezaka saingy tsy ampy mihitsy. Nofidiana manokana i Madagasikara handray ny fivoriana ataon’ireo mpisehatra amin’ny fiadiana amin’ny ady amin’ny kolikoly eto Afrika (Assosiation des Agences Anti-Corruption Africaines na AAACA).
Morarano Gara “Atao tsara tantana ny vola avy amin’ny orinasa Ambatovy”
Ny taona 2018 teo dia nahazo vola 2 500 tapitrisa ariary tamin’ny orinasa Ambatovy ny kaominina Morarano Gara ary miampy isan-taona io hatramin’ny 2040. T
Mbola ambony ny tahan’ny zana-bola sy ny saran’ny fahafahana mindram-bola amin’ny banky eto Madagasikara raha oharina amin’ny firenena hafa, hoy ny governoran’ny Banky foibe, Andriamatoa Alain Herve Rasolofondraibe.
Antony ny tsy fahazoana antoka amin’ny orinasa sy ny olona mindram-bola ary tsy fantatry ny mpandraharaha amin’ny sehatra fampindramam-bola ihany koa ireo antontan-kevitra mahakasika ireo orinasa ampindramina vola ka izany no hakany antoka ambony be. Ho fanampiana ny banky amin’ny fampahafantarana ireo mpanjifa izay mikasa hindram-bola ao aminy ka hizotra amin’ny fanarahan-dalàna sy ny filaminana dia miasa eto Madagasikara mandritra ny herintaona ny biraon’ny fanelanelanana ny banky sy ny mpindram-bola ( BIC) manomboka izao. Mihena araka izany ny mety ho risika amin’ny fampindramam-bola ary hiteraka fanamorana amin’ny fampindramam-bola izao fanapahan-kevitra izao.